झारफुकको नाममा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने पक्राउ - विराटपथ
०५ माघ २०७७, सोमबार
घटना / दुर्घटना
केही दिन भित्र नियमित प्रकाशनमा आउनेछौ ।
विराटपथ अनलाइनको यो परिक्षण प्रकाशन हो ।
» अपराध » प्रमुख समाचार
झारफुकको नाममा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने पक्राउ
शनिबार, आश्विन १०, २०७७
विराटनगर । झारफुक गरि सन्तान प्राप्त हुने भन्दै जबरजस्ती करणी गर्न खोज्नेलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले भदौ – २५ गते विहान एक विवाहित महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै बौना राम भन्ने चन्देश्वर राम चमारलाई पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले विराटनगर महानगरपालिका – १८ बस्ने चन्देश्वरलाई असोज १ गते पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सोही वडा बस्ने एक महिला विवाह भएको ५ – ६ बर्ष भएपनि सन्तान नभएपछि उन कै श्रीमानले गाँउघरमा झारफुक गर्ने चन्देश्वरलाई झारफुक गर्न लगाएका थिए । बालबच्चाको जन्म हुन्छ भन्ने आशमा भदौ २४ गते रातभर महिला कै घरमा चन्देश्वर धामी बसेका थिए ।
प्रहरीमका अनुसार २४ गते बेलुका धामी बसेका आरोपी चन्देश्वरले पीडित कै घरको कोठामा २५ गते विहान ४ बजे जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेका थिए । उनले महिला एक्लै भएको मौका छोपेर महिलाले लगाएलको साडी खोली करणी गर्न खोज्दा उनका श्रीमानले देखेका थिए ।
पीडित पक्षको जाहेरीका आधारमा चन्देश्वर राम चमारलाई असोज १ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान भई रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्वराजा झापा आइपुगे
मध्यरातमा हतियार सहित एकजना पक्राउ
‘मेरो श्रीमानको हत्या भयो’
गोली लागेर वन कर्मचारीको मृत्यु
radio रेडियो सुन्नुहोस् !
लगनगाँठोमा बाँधिदै नायिका तथा मोडल रेश्मा घिमिरे
बेपत्ता युवकको शव भेटियो, आफ्नै साथी परे पक्राउ
उद्योगबाट कुनै गडबडी भएको छैन : कोशी ग्यास
प्रधानमन्त्री र भारतीय सेना प्रमुख नरवणेबीच भेटवार्ता
विराटनगरमा थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
हास्यव्यंग कलाकार मनोज गजुरेलको अबस्थामा सुधार
मोरङको डाँइनिया मस्जिदमा फेला परे ९ जना पाकिस्तानी
एक पूर्व प्रहरी अधिकृतको गृहमन्त्रीलाई खुलापत्र
पत्नीको योजनामा देवीप्रसादको हत्या, तीनजना पक्राउ
‘न तातोपानी खाए, न सिटामोल नै’
तरहरा हत्याकाण्ड : समातिए तीन अभियुक्त, थप अनुसन्धान हुँदै
गलत कुरा गरेर भम्र छरियो : राज्यमन्त्री दुगड
कोही बिरामी परे, उल्लेखित डाक्टरसँग परामर्श लिन सकिने (डाक्टरको नाम र मोवाइल नम्बर सहित)
भगवान र चिकित्सक प्रति आभारी छु : डा. कार्की
रहरले होइन जिम्मेवारी पुरा गर्न आएको छु : सुनसरी प्रहरी प्रमुख
लकडाउनलाई कडाई गरिदै, मानविय गतिविधि शुन्य पार्ने
प्रदेश १ को नाम के राख्दा उपयुक्त होला ?
दुवै ठिक छैन
विराट मिडिया नेटवर्क (प्र.)
# सूचना विभाग दर्ता नं. : – XXXXXXX
# ठेगाना :- विराटनगर महानगरपालिका – ९ शान्तिचोक
# सम्पर्क : – ९८५१०५२८११
# अध्यक्ष : सुष्मा श्रेष्ठ
# सल्लाहकार सम्पादक : प्रल्हाद गुरागाई
# सम्पादक : दीपक कोइराला
# भिडियो निर्देशक : प्रतीक श्रेष्ठ